नार्क राजनीतिको प्राथमिकतामा परेको छैन | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » नार्क राजनीतिको प्राथमिकतामा परेको छैन
नार्क राजनीतिको प्राथमिकतामा परेको छैन
प्रवक्ता, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)
कृषि र किसानका लागि अध्यक्ष अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) अहिले विरामीको अवस्थामा पुगेको छ । वजेटदेखि कर्मचारी, कर्मचारीदेखि विदेश भ्रमण लगायतका विषयमा पटक पटक विवादमा आइरहने नार्क कार्यकारी निर्देशकविना चलिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ महतोलाई मन्त्रीले मन्त्रालय झिकाएपछि उहाँ आफ्नो पदबाट राजिनामा दिइसक्नु भएको छ । त्यसले गर्दा थुप्रै काम कारवाही प्रभावित भएको छ । अध्ययनको काम समेत प्रभावित भएको छ । संघीय संरचनामा लैजाने ऐन, कानुन पनि समयमा सम्पन्न भइरहेको छैन भने नार्क सञ्चालन नीति पनि हालसम्म पास भएको छैन । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा सहारा टाइम्सले नार्कका प्रवक्ता हरिकृष्ण उप्रतिसँग गरिएको कुराकानीः
नार्कलाई संघीय संरचनामा लैजानका लागि के के भइरहेको छ अहिले ?
–सविधानले हामीलाई संघ र प्रदेशमा राखेको छ । हाम्रा जतिपनि कार्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु छन् ती सबै संघ अन्तर्गत रहनेछ । पछि प्रदेश सरकारको माग कस्तो हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले काम गर्ने भनेका छौं । क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रदेश कृषि अनुसन्धान केन्द्र वा निर्देशनालयमा रुपान्तरण गरी प्रदेश अन्तरर्गत राख्ने गरी कुराकानी भइरहेको छ । यी सबै गर्नका लागि ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । नार्कको अध्यक्ष कृषिमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँमार्फत मन्त्रीपरिषद्मा जानुपर्ने हो तर भइरहेको छैन । कृषिका अरु कार्यालय तथा विभाग जस्तो जिल्ला जिल्लामा संयन्त्र रहेको छैन । त्यसले गर्दा संरचना बनाउन ढिलो भइरहेको छ । तर प्रदेश स्तरमा पनि लैजाने कुराकानी भइरहेको छ ।
त्यसमा किन ढिलाई भएको हो त ?
–हाम्रो नार्कमा अहिले नेतृत्व तहमा ट्रान्जिस्नल अवस्था रहेको छ । नार्कका कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको अवस्था छ । हुन त पहिला पनि कन्फर्म अवस्थामा हुनुहुन्थेन । पहिलादेखि नै मन्त्री फेरिनेसँगै कार्यकारी निर्देशक पनि फेरिने कारणले सोचे जस्तो काम भइरहेको थिएन । अहिले स्थिर सरकार छ । कार्यकारी निर्देशक राजिनामा दिएपनि नयाँ नियुक्त भएको छैन । त्यसले गर्दा पनि काम प्रभावित भइरहेको छ । नयाँ कार्यकारी निर्देशक आउने वित्तिकै काम शुरु हुन्छ । यद्यपी काम रोकिएको छैन । सायद एक दुई महिनामा संघीय संरचनामा सबै काम पुरा हुन्छ ।
यसले त अध्ययन अनुसन्धानमा असर गर्छ नि त ?
–स्थापना कालदेखि नै नार्क यस्तै यस्तैमा रुमलिएका छन् जसले गर्दा पक्कै पनि अनुसन्धान कार्यमा केही नकेही प्रभाव परेको छ । कर्मचारी तथा वैज्ञानिकहरुको जोश जागरमा असर गरेको छ । तर माथिल्लो नीतिले गर्दा अनुसन्धानमा कुनै असर गरेको छैन । अनुसन्धानका कामहरु रोकिएको छैन । अनुसन्धानका नियमित कामहरु भइरहेका छन् । अनुसन्धानको कामहरु रोकियो भने बीउ, बाली, वस्तु भाउको नियमित प्रकृया नै प्रभावित हुन्छ । त्यसै माथि माथि जे भएपनि हामीले नियमित हुने अनुन्धानका कामलाई प्रभावित हुन दिइरहेका छैनौ ।
हालसम्म नार्कको रणनीति पनि बनेको छैन अनि कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ?
–नार्क भिजन नबनेको होइन । नार्कले परिषद्बाट पास गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यहाँबाट भन्दा अगाडि बढेको छैन । राण्नीति क्याविनेटले नै पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो संसदमा लैजानै पर्दैन तर त्यो पनि भइरहेको छैन । ऐनको आधारमा हामीले काम गरिरहेका थियौं तर कृषि अनुसन्धान रणनीति चाहिन्छ नै । यो न हुँदा अलमलिने काम भइरहेकोे छ । नार्कले स्पष्ट भिजन नहुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेको छ । यो रणनीति नआउनुमा पनि हामीले राजनीतिक उथलपुथललाई नै लिन्छौं । राजनीतिज्ञहरुले नार्कलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् जस्तो लाग्दैन । राज्यले पनि त्यति ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ ।
बीउ, विजन तथा गाईवस्तुको क्षेत्रमा केही नयाँ अनुसन्धान भइरहको छ कि छैन ?
–अहिले कलाईमेटस चेन्जका कुराहरु आइरहेका छन् । त्यसमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । बदलिँदो वतावरणले गर्दा बालीवस्तुलाई कसरी अनुकुलन गर्न सकिन्छ त्यसका लागि हामी अनुसन्धानमा लागेका छौं । गाईवस्तु पालनमा दानामा अहिले हाइकोस्ट परिरहेको छ । त्यसको लोकोस्ट कसरी गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । मसिनो चामल कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नयाँ नयाँ जातको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । गहुँ, मुसुरो, कोसेबालीहरुको नयाँ जातको बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । गेहुँका नयाँ जातहरु वाणगंगा, तिलोतमा लगायत जातको बारेमा वैज्ञानिकले अध्ययन गरेको छ ।